याक्थुङ् पालाममा उदाइन - सुनिता केदेम लाबुङ् - Samadarshi Sanchar
याक्थुङ् पालाममा उदाइन – सुनिता केदेम लाबुङ्
, मङ्गलबार, ३० भदौ, २०७७, बिहानको ०४:३३ बजे
उच्च मनोवल भएकी सुनिताले खेलकूद तर्फ फूटबल, भलिबल र म्याराथुन दौडमा समेत पटक–पटक भाग लिएर बाजी जित्दै आएको नौलो घटना भने होइन । खेलकुद र याक्थुङ लोक छन्दहरुमा सानै देखि रुची भएको सुनितामा विलक्षण प्रतिभा, कला र गला छ । याक्थुङ् सांस्कृतिक माहोलमा हुर्के बढेका जिज्ञासु सुनिताले याक्थुङ् लोक वाङ्मयका ख्याली, पालाम्, हाक्पारे, तुवा, ताम्के र केलाङ जस्ता विधाका गायनमा राम्ररी दक्षता हासिल गरेको पाइन्छ ।
पुस १५ गते २०७६ साल अर्थात ३१ डिसेम्बर २०१९ कादिन चीनको वुआन शहरबाट एउटा रोग देखा प¥यो । जसलाई कोरोना अर्थात् कोभिड–१९ नाम दिए विश्व स्वास्थ्य संगठनले र चाँडै महामारीको रुप लिने समेत घोषणा ग¥यो । नभन्दै केही महिना नवित्दै विश्वभर महामारी कै रुप लियो । आजतक बढ्दो क्रमले विश्व आक्रान्त छ । सबै देशहरु लडकडाउनमा छन् । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन ।
नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारण गत साल चैत ९ गतेदेखि श्रावण महिनासम्म चार महिना लकडाउन रहेको थियो । त्यहि समय याक्थुङ साक्थिम्मिबा सयङ्ले पहिलो विश्वव्यापी अनलाइन पालाम प्रतियोगिता २०२० आयोजना गरेर लकडाउनको सदुपयोग गरेको थियो । जसमा जम्मा प्रतियोगी ३५२ जनाले सहभागिता जनाएकोमा ताप्लीजोङ्की सुनिता केदेम लाबुङले प्रथम स्थान बाजी मारिन् । उनै उदियमान प्रतिभाको परिचय संक्षेपमा प्रस्तुत छ ।
मेवाखोला, मैवाखोला र तमोरखोलाको संगमस्थल दोभान बजार पूर्व क्षेत्रमा परिचित नाम नै हो । दायाँ–बायाँ मेवा–मैवाखोलाले सिमाना बारेको उत्तरमा हिमाली श्रृङ्खला मुनिको सुन्दर पहाडी काखमा रहेको मेरिङ्देन गा.पा.नं. २ सान्थाक्रा गाउँ छ । यस सान्थाक्राका पूर्णबहादुर केदेम र माइतरानी पालुङ्वाको ३ भाइ छोरा ३ बैनी छोरी मध्ये कान्छी छोरीको रुपमा वि.सं. २०४२ सालमा सुनिता केदेमको जन्म भएको थियो ।
जन्मपछि आमाबुबा, दिदी–दाजुभाइ संगै परिवारिक, संस्कार, संस्कृतिसँग घुलनशिल भएर हुर्कने, बढ्ने वातावरण पाइन । बनको काँडा तिखार्नु पर्दैन भने झैं सुनिता सानै देखि जिज्ञासु र कर्मशिल भएको छिमेकी गाउँले र उसका दौतारी साथीहरु बताउने गर्छन् ।
सानो छँदा घाँस, दाउरा, गोठाला, खेतलाको क्रममा कैयौं उकाली–ओराली धाएका र कठिन परिश्रम गर्न पछि नपरेका सुनितालाई जस्तो सुकै काम कर्तव्य परेपनि आफू संयम भएर धैर्यताका साथ कर्तव्य सम्हाल्ने बानी छ । इमान्दारिता आफनो इज्जत सम्झिने संस्कार छ । यसप्रकारको कर्म र कार्यले समाजमा विश्वासिलो पात्र बन्न सफलता मिलेको पाइन्छ । उच्च मनोवल भएकी सुनिताले खेलकूद तर्फ फूटबल, भलिबल र म्याराथुन दौडमा समेत पटक–पटक भाग लिएर बाजी जित्दै आएको नौलो घटना भने होइन । खेलकुद र याक्थुङ लोक छन्दहरुमा सानै देखि रुची भएको सुनितामा विलक्षण प्रतिभा, कला र गला छ । याक्थुङ् सांस्कृतिक माहोलमा हुर्के बढेका जिज्ञासु सुनिताले याक्थुङ् लोक वाङ्मयका ख्याली, पालाम्, हाक्पारे, तुवा, ताम्के र केलाङ जस्ता विधाका गायनमा राम्ररी दक्षता हासिल गरेको पाइन्छ । ती कुनै पनि विधामा निपुनता प्राप्त गरेर मात्र पनि पुग्दैन सर्जकहरुमा स्वरले पनि साथ दिनु पर्दछ । आवश्यकीय गुणहरुले सुनितालाई राम्ररी साथ दिएको छ । कला त जन्मपछि सिकिन्छ तर गला भने जन्मसिद्ध आएको हुन्छ, त्यो सबैलाई पेवा हुँदैन, सिमित मान्छेमा मात्र अंश परेको हुन्छ, त्यो गला सुनितामा पाइन्छ । संयोग हुनसक्छ । सुनिताको भाग्यले जुराएको र कर्मले जित्नु पहिलो विश्वव्यापी अनलाइन पालाम् गायन प्रतियोगिता २०२० हुनु ।
विलक्ष्ण गलाकी धनी सुनिताको जीवन संघर्ष, लगनसिलता, संयमता, धैर्यताको परिणाम नै महानता हो । महानतामा रचनात्मक र सिर्जनशिलता मिलेपछि सफलता हात लाग्ने हो । यसमा साथ सहयोगको पनि आवश्यकता पर्दछ । परिवारिक वातावरणको पनि ठुलै भूमिका रहेको हुन्छ । नवोदित सर्जक के.वि. किराती (खड्ग लाबुङ)को जीवन संगेनी भएकोले यो उर्वर, उपलब्धीहरु निरन्तर तादाम्यतामा राख्न टेवा पुग्ने छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ । फूङ्लिङ् नगरपालिका वडा नं. ९ हाङ्देवा गाउँ कर्मथलो बनाइ संघर्षरत गला सम्पन्न सुनिता केदेम लाबुङ्को आगामी दिन शुभ रहोस् ।